Samsung Gear S3, falanqeyn leh qaababka, xulashooyinka iyo qiimaha | Androidsis
Samsung Gear S3, falanqaynta Isbaanishka
Alfonso ee Miraha | | Noticias, Reviews
Intii lagu jiray daabacaaddii ugu dambeysay ee IFA ee Berlin, soo saaraha Kuuriya ayaa soo bandhigay Samsung Gear S3, Smartwatch-ka cusub ee Samsung ee u taagan isticmaalka Tizen oo ah nidaamkeeda hawlgalka. Horeba Waxaan falanqeeyay Gear S2 waqtigaas oo waxay igu reebtay dareemid aad u wanaagsan, markaa hadda waa marki ugu dambeysay Samsung smartwatch kii ugu dambeeyay.
Sababtaas awgeed, kadib bil adeegsiga, waxaan kuu keenay dhammaystir Samsung Gear S3 fiidiyowga fiidiyowga, saacad caqli-gal ah oo loogu talagalay aaladaha Android ee u taagan tayada dhammaystirkeeda iyo is-maamul-weyne weyn. Taasi ma ku filan tahay inaad noqotid midka ugu fiican Android smartwatch?
1 Samsung Gear S3 wuxuu u eg yahay saacad caadi ah, waana war fiican.
2 Astaamaha farsamada ee Samsung Gear S3
3 Ismaamul aan horay loo arag
4 Tizen, OS aad u fiican oo loogu talagalay smartwatch
5 Samsung Gear S3 waa saacad loogu talagalay cayaaraha
6 Gear S3 wuxuu la jaan qaadayaa Android 4.4, in kastoo uusan wada aheyn
7 Gabagabadii ugu dambeysay
8 Gear S3 Sawirka Sawirka
9 Fikirka Tafatiraha
Samsung Gear S3 wuxuu u eg yahay saacad caadi ah, waana war fiican.
Samsung ayaa la soo bandhigay laba nooc oo kala duwan oo ah Gear S3. Dhinac waxaan ka leenahay Daabacaadda Xadka, cayaaraha ka sii badan waana qaybta aan falanqeeyay. Ta labaad waa Daabacaadda caadiga ah, Kaas oo u muuqda mid bixinaya xarrago lagu daray faahfaahinta sida suunka saacadda ama waxoogaa yar oo dagaal badan.
Sikastaba dheh labada qalab waxay leeyihiin qaas ah oo aan runtii ka helay: waxay u egyihiin saacad caadi ah. Dhammaadka iyo qalabka ay ku dhisan yihiin waxay soo jeedinayaan in Gear S3 uusan ahayn smartwatch taasina waa mid ka mid ah qodobbada lagu farxo ee aan u arko inay ugu muhiimsan yihiin qalabkan.
Sheyga wuu ka yara weyn yahay kii ka horeeyay, oo ka bilaabanaysa 1.2 inji oo uu Gear S2 lahaa illaa 1.3 inji oo ah nooca cusub, marka lagu daro lahaanshaha naqshad wareeg ah oo aad iyo aad u sii jaangoynaya aaladda noocan ah.
Waxa ugu horreeya ee aad dareento marka aad saacadda dhigayso waa el Samsung Gear S3 waa qalab aad u weyn oo weyn. Taasi waxay ka dhigeysaa smartwatch-kan inuusan ku habbooneyn curcurada oo dhan iyo in kastoo ay tahay qaab unisex, waxaa loogu talagalay dhagaystayaasha ragga ah.
Tan waxaan ula jeedaa waa taas, Haddii aad ka fiirsaneyso inaad iibsato saacaddan, waxaa wanaagsan inaad marka hore isku daydo Gear S3 si aad u aragto sida ay gacantaadu u dareemayso.
Wixii ku saabsan dhammaadka, waxaan ku bilaabi doonaa ka hadalka ku saabsan kiiska daawashada, oo ka sameysan bir bir ah taasina waxay siineysaa Gear S3 dareen weyn oo adkaysi iyo adkaysi. Waana sidaas. Qalabka runtii waa adag yahay. Waxay qaadatay in kabadan hal dharbaaxo inta lagu gudajiray isticmaalkeeda aaladuna sifiican ayay iskaga caabisay shilalkaas. Dhibic wanaagsan Samsung for arrintan la xiriira.
Sida suunka u dheh Xudduudda waxay leedahay suun silikoon ah taas oo aad ugu raaxeysata taabashada runtiina wanaag ka dareemeysa curcurka. Waxaad dhahdaa xoogaa way ku dhegan tahay taabashada, laakiin si dhakhso leh ayaad ula qabsatay. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan si dhakhso leh oo fudud u beddeli karno suunka haddii aanan jeclayn tan iyo markii soo saaraha Kuuriya uu adeegsanayo heerka, xaaladdan, oo leh 22 xarkaha mm.
ka codadka madow waa halyeeyada ku jira nashqadda saacadda, laakiin waxaa jira hal cunsur oo runtii ka dhex muuqda aaladdan: giraanta wareegsan iyo wareegga oo ku taal wajiga saacadda iyo in aan horayba ugu aragnay qaabkii hore. Giraantan waxaan ku mari karnaa interface-ka Samsung Gear S3 si deg deg ah oo raaxo leh adigoon isticmaalin shaashadda, sidaa darteed waxaan sidoo kale iska ilaalin doonnaa faro aan la rabin.
Dhinaca midig waxaan ka helaynaa laba badhan iyo makarafoon yar halka dhanka bidix ay tahay meesha aan ku arki doonno waxyaabaha hadlaya afhayeenka. Taabashada badhannadani waa ku filan tahay, oo bixisa dareen weyn oo cimri dherer iyo in ka badan safar saxan cadaadis.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay dareeraha garaaca wadnaha oo ku yaal salka qalabka. Iyo xiriirada korantada? Ma arki doontid iyaga maxaa yeelay amarka saacaddu waa wireless iyo kicinta.
Arintaan waa inaan dhahaa ewuxuu shaqeeyaa Samsung oo leh Gear S3 waa mid aan fiicnayn. Intii aan ku jiray isticmaalka qalabka, dareemayaasha ayaa ahaa kuwo aad u wanaagsan, oo dhadhan weyn ka tagaya afkayga. Dabcan, sidaan kuu sheegay, ma ahan saacad ku habboon curcurada oo dhan iyo in ka badan hal qof ayaa ii sheegay inay aad uga weyn tahay dhadhankooda. Laakiin, waxa laga sheegay, ee ku saabsan dhadhanka midabada.
Astaamaha farsamada ee Samsung Gear S3
Tusaale Qalabka Geerida S3
Nidaamka hawlgalka Tizen 2.3.2
Screen 1.3 "Super AMOLED oo leh Gorilla Glass SR + ilaalin
Gacaliye Exynos 7270 laba-geesle 1 GHz
Xuduudaha kala duwan 802.11n Wifi / Bluetooth 4.1 / NFC / GPS / accelerometer / barometer / garaaca wadnaha / ikhtiyaarka lacag bixinta moobilka
Ku daray Shahaadada IP68 / makarafoonka / afhayeenka
Batariga 380 mAh aan laga saari karin
Qiimaha 330 euros iibinta Amazon
Kahor intaadan kahadlin sida Gear S3 u dhaqmo, waxaad dhahdaa in nashqad noocan oo kale ah ay u ogolaato, waxyaabo kale, in la siiyo Samsung smartwatch-ka cusub adkeysiga biyaha iyo boodhka mahadsanid adiga Shahaadada IP68. Laakiin arrintu halkaas kuma eka.
Iyo in qalabka sidoo kale uu leeyahay MIL-STD-810G qeexitaan militari taasi waxay damaanad qaadeysaa in Gear S3-kani u adkeysan doono jug kasta ama dhicitaan suuragal ah oo ay ku dhici karto, marka lagu daro in loo adeegsan karo biyaha hoostiisa si loo siiyo tusaalooyin qaar.
Samsung ma ahmiyad weyn siineyso dhinacan si looga fogaado sheegashooyinka suurtagalka ah haddii saacadu waxyeello u geysato haddii aan quusinno, tusaale ahaan, biyaha milixdu ku jirto, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad qalabka ku isticmaasho madaxaaga oo haddii aad ku qubeysato ka dib maydh waxaa ku jira durdur biyo ah.
Inta kale ee tafaasiisha, Samsung waxay go'aansatay inay sharad ku dhigto mid ka mid ah xalalkeeda si Gear S3 loogu noolaado. Waxaan ka hadlayaa processor-ka Exynos 7270, yaab badanaa xaga awooda iyo hufnaanta. Soosaarka SoC-kan oo leh 14 nm tiknoolajiyad waxay u oggolaaneysaa in lagu gaaro waxqabad aad u wanaagsan laakiin gaar ahaan isticmaalka tamar aad u hooseeya, sida aad arki doonto hadhow.
C802.11n WiFi hal-abuurnimo Waa mid kale oo ka mid ah awooda qalabka tan iyo markii ay kordhiso madax-bannaanideeda xitaa in ka badan iyada oo aan loo baahnayn inay ku xirnaato shabakadda xogta taleefankeenna. Iyo haa, Gear S3 ayaa leh Bluetooth 4.2, NFC iyo MST (Gudbinta Ammaanada Magnetic) taasina waxay noo oggolaan doontaa inaan lacag ku bixinno Samsung Pay.
Ilaa maanta, inkasta oo ay jirto a tusaalaha e-sim Sharciyada hada kajira Spain awgood, moodeelkan lagama heli karo wadankeena, inkasta oo Samsung horeyba uga dhawaajisay inay imaaneyso goor dhow. Waxaan rajeynayaa inay run tahay.
Riwaayad kale oo weyn ayaa la socota joogitaanka sameecado noo oggolaan doonta inaan wicitaan ka yeelno ama ka yeelno saacadda adigoon la soo bixin taleefanka gacanta. Imtixaanadayda waxaan ku arkay in tayada codka ay aad ufiican tahay, in kastoo aan dhaho jawiga buuqa way adagtahay in la maqlo wadahadalkeena. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan arkaa noocyada wax lagu daro oo aad waxtar u leh inaan ka jawaabo wicitaan, tusaale ahaan, gaariga, laakiin inaan si joogto ah loo isticmaalin.
Kahor intaanan faallo ka bixin in processor-ka ay Samsung u dooratay inuu sameeyo garaaca Gear S3 uu yahay wax yaab leh marka la eego keydinta batteriga. Caddaynta tani waxay tahay in imtixaanadayda aan ku guuleystay a is-maamul afar maalmood ah oo bixinaya adeeg dhexdhexaad ah, oo gaadhaya saddex maalmood oo la isticmaalayo maalmihii aan sida ugu badan ka soo tuujiyay saacadda.
Madax-bannaani weli ka fog toddobada maalmood ee aan u arko inay lagama maarmaan u tahay saacadda casriga ah inay shaqeyso mana aha inaan ka walwalno inaan ku soo oogno qalab kale, laakiin sidoo kale waa run in is-xukunka Samsung Gear S3 uu si dhib yar u wada qabanayo tartamayaasheeda.
Qaybta taban waxay la timaaddaa nidaamkeeda magnetic magangelyada oo wax yar ka qaadata laba saacadood iyo badh in si buuxda qalabka looga qaado. Xumaan yar haddii aan tixgelinno madax-bannaanida cajiibka ah ee Samsung Gear S3.
Tizen, OS aad u fiican oo loogu talagalay smartwatch
Samsung waxay rabtay inay kala soocdo tartamayaasheeda iyadoo ku sharadaysa nidaamkeeda hawlgalka si ay nolol ugu hesho khadka saacadaha casriga ah. Waana in Gear S3 uusan ku shaqeynaynin android Wear, haddii aanu la socon Tizen 2.3.2, noocii ugu dambeeyay ee OS ee ay Samsung u sameysay aaladahaas waana mid ka mid ah sababaha ismaamulkeeda weyn.
Tizen waxay leedahay bakhaar codsi iyo dhinacyo kaladuwan oo ah qalabka noqon karaWaxaan ku habeyn karnaa moobaylkeena in meel fog laga rakibo saacadda.
Buugga la heli karo ma xuma, in kasta oo aan seegay codsi iyo xaqiiqda taas saacaddu waxay leedahay rakibidda ciyaarta Fruit Ninja Waxay muujineysaa awoodda ay qalabka qalabkani bixiyo.
Habka loola falgalo nidaamka wuxuu ku saleysan yahay taabashada ama isticmaalka giraanta dibedda. Giraanta loo yaqaan 'Saciid' ayaa u wareegaysa labada dhinacba taas oo noo oggolaanaysa inaan si dhakhso leh ugu gudubno xulashooyinka kala duwan Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu raaxada leh ee loo maro wareegga saacadda casriga ah. Waxaan rajeynayaa in tartanku uusan waqti dheer ku qaadan doonin in la qaato macluumaadkaan.
Ka dib bil isticmaalkeed, waxaan dhihi karaa in khibradeyda arrintan ku saabsan ay ahayd mid aad u wanaagsan, laakiin mayaMise waxaan dhihi karaa Tizen wuu ka fiican yahay Android Wear, wey iska duwan tahay.
Samsung Gear S3 waa saacad loogu talagalay cayaaraha
Samsung waxay soo kordhisay shaqooyin taxane ah saacadeeda casriga ah ee cusub taas oo ka dhigaysa Gear S3 qalab ka farxin doona inta badan ciyaartooyda.
Si aad ugu bilowdo, c terminalkaWaxay leedahay S-Health Marka marwalba waxay kormeeri doontaa talaabooyinkayaga iyadoo duubaysa hawl maalmeedkeena waxayna nagu dhiiri galinaysaa ogeysiisyo si aan usii wadno. Marnaba iguma muuqan wax faragelin aniga, taa lidkeeda, waxay bixisaa dhiirigelin dheeri ah oo aan mararka qaarkood u baahanahay.
Sdareeraha garaaca wadnaha runti si fiican ayey u shaqeysaa iyadoo siineysa natiijooyin aad u sax ah waqti gaaban. Faahfaahin kale oo aad u xiiso badan ayaa la socota xaqiiqda ah in saacaddu ay awood u leedahay inay ogaato inaan sameyneyno waxqabad, inkasta oo aysan ahayn midka, laakiin waxay gelaysaa qaab otomaatig ah oo ay ku qiimeynayso dadaalka loogu jiro in lagu bixiyo kalori kalooriye.
Dabcan, fiiro gaar ah ha siinin maadaama ay u egtahay inay bixiso natiijooyin waxoogaa ka hooseeya intii la filayay. Kiiskeyga waxaan u baxayaa inaan si joogto ah u ordo diiwaanaduna aad ayey uga hooseeyeen aaladaha kale.
Iyo orodyahanada iyo baaskiil wadayaasha ayaa leh Gear S3 wuxuu leeyahay GPS taas ayaa noo oggolaan doonta inaan si iskiis ah ula soconno tallaabooyinkeenna oo dhan, adigoon taleefanka kula qaadan. Markaan guriga tagno, waxay si otomaatig ah ula shaqeyn doontaa aaladdayada.
Ugu dambeyntii ogow inay leedahay barometer y altimitir, Faahfaahin si aad u tixgeliso maaddaama aysan jirin saacado badan oo caqli badan oo leh shaqadan.
Gear S3 wuxuu la jaan qaadayaa Android 4.4, in kastoo uusan wada aheyn
Haa Gear S3 wuxuu ku xirnaan karaa qalab kasta oo Android ah inta ay ka soo baxayso laba shuruudood: yeelasho Android 4.4 ama ka sareeya oo leh 1.5 GB oo RAM ah.
Waxaan awooday inaan ku tijaabiyo Gear S3 qaabab kala duwan waana inaan sheegaa in dhowr nooc oo Huawei ah ay ka shaqeysay dhibaato la'aan laakiin marka laga hadlayo OnePlus One natiijooyinku waxay noqdeen musiibo, wax la mid ah ayaa ku dhacay qaabkii hore.
Hawlaha aasaasiga ah way shaqeeyeen, markaa waxaan helay ogeysiisyo iyo wicitaanno, laakiin waxaa jira qaybo kale oo ay in badan ku fashilantay. Waxaa la ogsoon yahay in adeegsiga nidaamka deegaanka ee Samsung uu muhiim u yahay moodellada qaarkood sidaa darteed Waxaan kugula talinayaa inaad internetka eegto haddii taleefankaagu si buuxda ula jaan qaadayo Gear S3.
Sida aad ku arki doontid falanqaynta fiidiyowga taas oo madax ka ah qodobkan, iyada oo qalabka 'Gear S3' waxaad heli doontaa ogeysiisyo xitaa waad uga jawaabi kartaa iyaga iyada oo loo marayo nidaamkeeda aqoonsiga codka, marka dhinacaas waa inaadan ka welwelin.
Samsung shaqo fiican ayey ku qabatay tan Samsung Gear S3, aalad leh nashqad weynsanadka, agab sharaf leh iyo ismaamul heer sare ah. Laakiin waxaa jira dhowr dabadood oo xisaabta lagu darsado: hal dhinac, xaqiiqda ah inay la shaqeyso Tizen maadaama ay noqon karto OS aan qof walba jeclayn, shaqsiyan waan jeclaaday, iyo inta badan dhibaatooyinka iswaafajinta suurtogalka ah.
Waxaan idhi, haddii aad haysato qalab Samsung ah oo aad rabto smartwatch fiican, ha ka waaban, Gear S3 waa ikhtiyaar aad loogu taliyay, laakiin haddii aad taleefanku waa nooc kale oo ka fiican intaanad adigu naftaada u sheegin si aad u ogaato inaad adeegsan karto 100% dhammaan howlaha Gear S3.
Gear S3 Sawirka Sawirka
Naqshad wanaagsan oo dhammeystiran
Waa millatari la aqoonsan yahay
Cabirkiisu kama dhigayo mid ku habboon dhammaan curcurada
Aan la jaan qaadi karin qaar ka mid ah moodooyinka Android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Samsung Gear S3, falanqaynta Isbaanishka
Adiguna ma aadan dhihin in shaqada wassapku ay u shaqeyso xanuun dartiis. Kaliya waxaad heleysaa farriinta ugu dambeysa ee xiriir kasta oo uusan ku shaqeyneyn maxaa yeelay waxaa jira dad sida caadiga ah soo diraa wadahadal loo qeybiyay 3 ama 4 farriin waxaadna arki doontaa oo kaliya kan ugu dambeeya. Haddii kale layaab, laakiin dhibaatadan aniga igu ah waa naafonimo muhiim ah in la xuso.
Ku jawaab Juancharlis
Opera Max 3.0 wuxuu balan qaadayaa 50% keydinta xogta markaad isticmaaleyso Facebook
Soosaarka Snapdragon 845 wuxuu galaa marxaladda tijaabada iyadoo loo marayo geedi socodka 7nm